आज असारको पहिलो दिन, कस्तो छ तपाईंको राशिफल ? - Everest Dainik - News from Nepal
आज असारको पहिलो दिन, कस्तो छ तपाईंको राशिफल ?
आज ०१ असार २०७७ सोमबारको राशिफल ।
अनावश्यक ठाउँमा धन खर्च होला । सामान हराउने वा नष्ट हुन सक्छ । खानापिन र स्वास्थ्य प्रति सजकता अपनाउन जरूरीछ ।
जोश जाँगर र हिम्मत वढ्नेछ । नयाँ ज्ञान प्राप्त हुने योग छ । शिक्षामा सफलता मिल्नेछ । विशिष्ट व्यक्तिको सहयोग पाईनछ ।
सानो प्रयत्नले ठूलो काम सम्पादन हुनेछ । छोटो दुरीको लाभदायक यात्रा हुनेछ । आफन्त र विशिष्ट व्यक्तिको सहयोग पाईनेछ ।
याे पनि पढ्नुस कस्तो बित्दैछ तपाइँको आजको दिन? हेर्नुस् राशिफल
नयाँ काम वा रोजगार पाईनेछ । धार्मिक तथा समाजसेवामा मनलाग्नेछ । मनमा शान्ति र छाउने र आर्थिक पक्ष सुदृढ बन्दै जानेछ ।
गरेका कामबाट राम्रै लाभ हुनेछ । श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ । आम्दानी बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुने समय छ ।
आजको दिन हाँसखेल र मनोरञ्जनपूर्ण समय हो । मनमा हर्ष,उमङ्ग र उत्साह छाउनेछ । राजनीतिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ ।
याे पनि पढ्नुस शुक्रबार कस्तो बित्दैछ तपाईंको दिन ? यस्तो छ राशिफल
आज रोकिए काम दोहोर्याएर गर्दा फाइदा हुन सक्नेछ । जीवनसाथीको सल्लाहमा गरिएको कार्यबाट अधिक सफलता मिल्नेछ ।
नजिकको व्यक्तिको सहयोगबाट कार्य पुरा हुनेछ धार्मिक कार्यमा रुची बढ्नेछ । आर्थिकपक्ष र व्यवसायबाट राम्रै लाभ मिल्नेछ ।
मनमा दोधारको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । पारिवारिक उल्झनमा परि आँटेको काम विग्रने छ । चोटपटकको भयछ, सचेत रहनुहोला ।
पारिवारिक सुख मिल्नुका साथै अध्ययन–अध्यापनको क्षेत्रमा प्रगतिको खबर सुन्न पाउनु हुनेछ । दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने वेला छ ।
आज अनुहारमा कान्ति र मनमा खुशी छाउला । व्यवसायिक क्षेत्र लाभप्रद रहनेछ । साथीभाई र पारिवारिक सहयोगपनि मिल्नेछ ।
विद्या र बुद्धिको विकास हुनेछ । बित्तिय संस्थाबाट सहयोग पाईनेछ । कला र गलाको प्रभाव बढ्नेछ । शत्रुहरू पराजित हुनेछन् ।